Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Fikayo Tomori Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Akụkọ ndụ anyị Fikayo Tomori na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Onwe na Net Net.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke ndị amụrụ ama si Canada na ndị agbụrụ Nigeria.
Lifebogger na-agwa gị akụkọ banyere oge mbido ya, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu ahụ. Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị ọdịdị nke Fikayo Tomori's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Marcos Alonso na-eto eto Akụkọ nke ọzọ na-emeghe akụkọ ihe omuma
Akụkọ Fikayo Tomori nke Childhoodmụaka- Nyocha rue ụbọchị. Ebe E Si Nweta IG.
Ee, onye ọ bụla na-ahụ ya dị ka onye azu zuru oke nke na-anaghị emehie ma ọ bụ onye Frank Lampard na AC Milan nwere obi ụtọ dị ukwuu.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Fikayo Tomori, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a, n'enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite.
Akụkọ Fikayo Tomori nke --mụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Fik”Na aha ya nile bụ Oluwafikayomi Oluwadamilola Fikayo Tomori. A mụrụ ya na 19th ụbọchị Disemba 1997 n'obodo Calgary, Canada.
N'okpuru bụ foto nke obere Fik na nne ya mara mma mgbe ọ ka bụ nwa ọhụrụ. Dabere na onye na-akwado Chelsea, foto a kwa bụ Naijiria.
Michy Batshuayi Nwa akwukwo akuko karia ihe omuma
Fikayo Tomori buuru nwa ya nke bu Fik.
A mụrụ Fikayo Tomori dị ka nwa mbụ na naanị nwa nwoke nke ezigbo nne na nna ya, Mr na Oriakụ Oluwadamilola Tomori, ndị sitere na ezinụlọ ha si Osogbo, Osun State, Southwest Nigeria.
Tupu amụọ ya, nne na nna Tomori biri na Lagos, Nigeria, tupu ha akwaga Canada ebe ha nwere ya. Ndị nne na nna abụọ ahụ yiri ka ha nọ n'ọgwụgwụ 40s dị ka n'oge ederede.
Fikayo Tomori na ndị mụrụ ya sere foto.
Fikayo Tomori sitere na ezinaụlọ nke ụlọ elu, onye akụ na ụba ya abụghị naanị na football, mana ya na ndị ikwu ya ndị otu ya nwere ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Southwest Nigeria.
Ị maara?… otu onye si n'ezinụlọ Tomori n'aha; Otunba (Oriakụ) Grace Titilayo Laoye-Tomori, MPA, BA, PGDE bụbu onye osote onye gọvanọ steeti Osun, Naịjirịa.
Nwanyị nwanne Fikayo Tomori - Otunba Grace Titi Laoye Tomori. Ebe E Si Nweta OliveBranch.
Laghachi n'oge nwata ya!. Mgbe ha nọrọ afọ asaa na Canada, ndị mụrụ Fikayo Tomori chere na ọ dị mkpa ka ekpughere ha nye ọdịbendị ọhụrụ na mgbanwe gburugburu ebe obibi. Ndị mụrụ ya na nwa ha nwoke si Calgary kwaga London, United Kingdom.
Fikayo Tomori Mmụta na Ọrụ Buildup:
Mgbe ọ nọ na London n'afọ 2004, Fikayo Tomori gara ụlọ akwụkwọ nyere ya ohere iji obi ụtọ gbaa bọọlụ asọmpi n'oge oge egwuregwu. Nke a mere ka ọ nwee mmasị n'ịhọrọ ọrụ.
Afọ 2004 hụkwara Chelsea FC na-atụgharị anya na-achịkwa bekee bekee Onye Pụrụ Iche onye kwadoro ndi Afrika dika Didier Drogba.
Onye ọ bụla nọ n'ụlọ ya na-akwado klọb na Tomori n'onwe ya nwere atụmatụ nke aka ya. O kpebiri na ya chọrọ ịbụ onye otu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ London.
Maka ya, ụzọ kachasị dị irè isi nweta nyocha maka nnwale na Chelsea FC Academy bụ ịbanye na Ụlọ Akwụkwọ Soccer Chelsea.
Mgbe ọ nọ n'ebe ahụ, ndị ọrụ scouts họpụtara ya n'etiti ndị na-eto eto. Na-esote, a kpọrọ ha maka ule na ụlọ ọrụ mmepe Chelsea FC.
Fikayo Tomori Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Fikayo Tomori sonyeere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea FC n'afọ 2001 dị ka nwatakịrị dị afọ asaa. Mgbe o sonyeere ya, a kpọgara ya na klọb n'okpuru-8.
Tomori gafere ụzọ nke ọma site na ntọala ntorobịa Chelsea, na-agbago n'ọkwa ọsịsọ n'oge ọrụ ya niile.
Nwa nke Kevin-Prince Boateng Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ị maara?… Fikayo Tomori n'oge ọ bụ nwata na ụlọ akwụkwọ Chelsea malitere ịmalite isoro onye ọkpụkpọ agụm akwụkwọ ibe ya, Tammy Abraham onye bụ ezigbo enyi ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke ndị enyi abụọ mgbe ha bụ nwata na ụlọ akwụkwọ Chelsea FC.
Fikayo Tomori Ndụ Ndụ Ndụ.
Oge na-efe efe!. Ọbụbụenyi ha gara n'ihu n'afọ iri na ụma ha dịka o gosipụtara na uwe elu ha.
Ma n'isi mmalite, ha nwere nrọ ha iru nke kachasị ọrụ ha, ndị isi otu. E nwere ike iji ọbụbụenyi ha tụnyere nke Nkume Mason na Chora Ohia.
Fikayo Tomori Biography - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Afọ 2015 na 2016 ghọrọ oge mgbanwe na ọrụ ntorobịa nke Tomori. O nyeere ndị otu ntorobịa Chelsea aka na ịdekọ mmeri na UEFA Champions League na iko ndị ntorobịa FA.
Iji gosipụta etu ọ dị mma, Tomori gbara goolu abụọ ahụ wee kpọọ ya onye egwu bọọlụ agụmakwụkwọ 2016 Chelsea FC nke afọ.
Akụkọ banyere ntorobịa Tomori akwụsịghị ebe ahụ ka ihe ịga nke ọma gara n'ihu. Na 2017, O nyeere ndị otu England U20 England aka ka ha merie FIFA U-20 World Cup maka oge mbụ na akụkọ ntolite ha na ihe omume mere na South Korea.
Fikayo Tomori Okporo tozọ Akụkọ.
Ọzọkwa, ihe ịga nke ọma ọzọ nke ntorobịa soro n'afọ na-esote 2018. Oge a, ọ nyeere ndị England U21 England aka ka ha merie Toulon Tournament. N'agbanyeghị mmezu ndị a niile, ha ka bụ ụjọ n'uche Tomori. Ugbu a, ka anyị gwa gị ihe kpatara ya.
Gịnị kpatara Egwu ?: Edepụtala nke ọma na Chelsea FC nwere mmasị na usoro mbinye ego maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ya, ọ na-ala azụ ịkpọ ha n'otu egwuregwu mbụ.
Nke a bụ ihe kpatara ụjọ ji jide n'uche kpakpando ụlọ akwụkwọ mmuta niile n'oge a na-ewere ha ka ha tozuru oke maka otu mbụ.
Dị ka onye egwuregwu agụmakwụkwọ na-agụsị akwụkwọ, egwu Tomori bịara ịchụ nta ya. Ya na ezigbo enyi ya Tammy Abraham enwetaghị oge egwuregwu zuru oke.
E zigara ha klọb ndị ọzọ ka ha nwee ike nweta ahụmịhe. Tomori ghọrọ onye otu ọhụụ nke ndị agha mgbazinye Chelsea FC n'agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime ndị kachasị mma na afọ agụmakwụkwọ ya.
Fikayo Tomori Bio - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Na mbọ iji nweta oge egwuregwu na ahụmịhe, Tomori nwetara Loan site na Frank Lampard Onye mgbe ọ nọ na njem ịwakpo ndị agha ịgbazinye ego Chelsea mgbe ọ họpụtara dịka onye isi nchịkwa Derby County. Lampard nwetara Tomori na ntinye ego na ntụkwasị obi.
Fikayo Tomori mechara nweta ezumike ike n'ime otu egwuregwu mbụ nke Derby County. Ọ kụrụ ala ọsọ ozugbo ọ bịarutere Pride Park, na-enyere ha aka iru njedebe egwuregwu-nke asọmpi.
Ị maara?… Amaghị oge Tomori pụtara ìhè. A kpọrọ ya aha Onye egwuregwu bọọlụ nke Derby na njedebe nke oge mbụ ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Nke a rụpụtara ya klọb nke ịbụ onye ọkpụkpọ ego izizi iji merie onyinye a. O mezuru nke a n'okpuru nduzi nke Chelsea FC Legend, Frank Lampard.
Fikayo Tomori ya na Frank Lampard n'oge njem Derby ha.
Mmekọrịta dị n'etiti Lampard na Tomori akwụsịghị ebe ahụ. Onye ọkpụkpọ abụọ ahụ na onye njikwa jikọtara na Stamford Bridge mgbe oge ha gasịrị na Derby. Nke a mere mgbe Lampard dochiri ya Sarri maka ọrụ Chelsea.
Na ikpe site na oge 2019/2020, o doro anya na Lampard jidere Tomori, Nkume Mason, na Tammy Abraham na nkwanye ugwu dị ukwuu.
Ọ bụ naanị oge tupu Tomori ghọrọ onye na-akwado ya na onye njikwa kachasị amasị ụlọ klọb London. Emezuwo ka nrọ ya mebiri emebi ka ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Onye bụ nwanyị Fikayo Tomori na nwunye ịbụ?
Site na ịrị elu ama ya, o doro anya na ọtụtụ ndị egwu Chelsea gaara ajụ ajụjụ banyere onye enyi nwanyị Fikayo Tomori nwere ike ịbụ.
Ee! ọ dịghị ihe ọ bụla na-agọnahụ eziokwu ahụ bụ na ọmarịcha mma-mma ya na ụdị egwuregwu ya agaghị eme ka ọ bụrụ osisi vine mara mma nye ụmụ nwanyị.
Ndị na-agba bọọlụ Chelsea ajụọla nso nso a… Onye bụ Nwanyị Fikayo Tomori?. Ebe E Si Nweta IG.
Dabere na ozi dị na njikwa mmekọrịta ọha nke Tomori, ọ dị ka ọ masịrị ilekwasị anya na ọrụ ya (dịka n'oge edere).
Eziokwu a na - eme ka o siere anyị ike ịnakọta ozi ọ bụla gbasara ndụ mmekọrịta ya na akụkọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị. Otú ọ dị, dị ka TheSun, a na-ebo ebubo na ndị ngba bọọlụ na-eso onye mmeri Love Island Amber Gill.
Tomata Fikayo Tomori Ndụ Ndụ nke onwe ya na ọrụ ịgba ọsọ egwuregwu ya ga - enyere gị aka inwe echiche dị mma ma zuo oke banyere ụdị ọmụmụ ya.
Na-amalite, Fikayo Tomori bụ onye na-anọghị n'ọrụ ọ na-arụ, na-anwa iwepụta oge naanị ya ma pụọ ​​na ihe niile n'ịchọ maka ezi ndụ pụtara.
Tomori nwere ike ịgbanwe echiche ya ka ọ bụrụ omume doro anya, nke ọ na-etinye na egwu egwuregwu.
Fikayo Tomori Ezigbo Ndụ Eziokwu. Ebe E Si Nweta IG.
Site n'echiche nke nkà ihe ọmụma, Tomori n'oge oge na-abụghị ọrụ hụrụ n'anya ịbịakwute ụwa na mbọ iji nweta ya ka o kwere mee.
Ndụ Fikayo Tomori Ezinụlọ:
Abịa na ezinụlọ, Fikayo Tomori raara onwe ya nye ma dị njikere ịme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla mmadụ nwere ike ime iji mee ka nna ya, mama ya, na nwanne ya nwanyị mara ezigbo mma nwee obi ụtọ.
Ngwa ngwa ya dị ka a hụrụ n'okpuru ezinụlọ na-ebi ezigbo ndụ na London n'ihi ọganiihu nke ha.
Tomori na ezinụlọ ya. Ebe E Si Nweta IG.
Ndị otu ezi-na-ụlọ niile na-anya isi na agbụrụ mbụ nke Naijiria ha anaghị eme ihere igosipụta ha. Nke a pụtara ìhè dịka nna, mama, na nwanne nwanyị nwanyị chọrọ Fik ka ọ kpọọ otu ndị otu Naịjirịa.
Mgbe nne Fikayo Tomori na nwanne nwanyị nwanyị mụrụ obere ndụ, nna ya na-etinye aka na ọrụ nwa ya nwoke.
Obi uto nke ikiri Ọkpara ya: Ị maara?… Mgbe ọ nọ na Derby County, Tomori nyeere ndị otu ya aka merie Manchester United na mkpochapu dị egwu site na Carabao Cup site na ntaramahụhụ ntaramahụhụ.
Ọ dịghị onye nwere obi ụtọ karịa nna ya nke wụliri elu ma nwee ọ inụ maka mmeri nwa ya nwoke. Lee vidiyo dị n'okpuru.
Tomori mgbe egwuregwu ahụ zipụrụ vidiyo na soshal midia nke nna ya na-awụlikwa elu ma na-agba egwu gafee otu ọnụ ụlọ ezinụlọ.
Ndụ Fikayo Tomori, Net Worth na Car:
Tomori dị ka n'oge ederede nwere uru ahịa nke nde pound 7 nke pụtara ịbawanye.
Inweta ihe a dị oke mkpa apụtaghị n'ụzọ ọ bụla na ndụ na-adọrọ adọrọ, nke otu obere ụgbọ ala mara mma, nnukwu ụlọ, na swagger dị mfe na-ahụ ngwa ngwa.
Fikayo Tomori LifeStyle Eziokwu.
Maka Tomori, enwere ego zuru oke iji bie ndụ nkịtị. Ọzọ, iji mee ka ị mara, anyị anaghị ejikọta ihe ịga nke ọma ego ya na arụmọrụ ya dị ka ndị na-agba ọsọ, na-ekpe ikpe na o sitere na ezinụlọ bara ọgaranya.
Fikayo Tomori Eziokwu Eziokwu:
1997, Afọ Tomori amụrụ gosipụtara mwepụta nke ihe nkiri Drama / Disaster akpọrọ "Titanic" nke ka bụ otu n'ime akụkọ ndị kachasị adọrọ mmasị n'akụkọ ihe mere eme.
N'afọ ahụ 1997 gosipụtara ọnwụ nke adaeze ndị mmadụ nke ụwa kpọrọ aha "Dynular Di". Princess Diana nwụrụ na Paris, n'ihe mberede ụgbọ ala mgbe paparazzi na-esochi ya.
Princess Diana nwụrụ n'afọ 1997. Ebe E Si Nweta Daily Express.
Nkwanye-ugwu na onyinye: Tomori bụ otu n'ime ndị na-agba bọọlụ na-eto eto nwere ọkaibe n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị otu ọ bụla egwuru egwu, na-achịkọta ọtụtụ trophi na nsọpụrụ onye ọ bụla dị ka edepụtara n'okpuru oge a.
Ihe ndekọ Fikayo Tomori na Nkwanye ugwu na Nchịkọta. Ebe E Si Nweta TheSun.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ nwata anyị Fikayo Tomori gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.